Posted by pandora at 10:41 PM
Those kids become those people.
It's reallyafantastic story and I like the way it symbolizes with so much to think about the hidden meanings. Thanks for sharing.
ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ မပန်ဒိုရာ..
Ag Minn Su
ဟတ္ထိ က Heart ထိတယ် ဗျာ ... :P
ဟတ္ထိ ကိုဖတ်သွားတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ အမရေ။ အခုလို ဖော်ပြတာ ကျေးဇူး။
လစ်ရင် လစ်သလို..မလစ်ရင် မလစ်သလို လိမ်တာ အကျင့်ပါနေလို့ ဖြစ်မယ်...။
မှန်လိုက်လေဗျာ။ လိမ်တဲ့လူကြီးတွေကြောင့် လူငယ်တွေ လူလိမ် လူမိုက် ဖြစ်ကုန်တာ မဆန်းပါဗျာ။
တိရိစ္ဆာန်ရုံ အုပ်ချုပ်ရေးမှုးသည် ညွှန်ကြားရေးမှုးဖြစ်လာကာ သူ့ကို အမိန့်ပေးသောအထက်အရာရှိသည် နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်လာသည်။
တိရိစ္ဆာန်ရုံဝန်ထမ်း နှစ်ဦးနှင့် ဆရာမတို့၏ သားသမီးများအရွယ်ရောက်လာသောအခါ အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်များ၌ ရရာအလုပ်များကို သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရင်း အခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့နေကြရသည်။
It's really, reallyagreat fiction. The way he built the structure is unique and the conclusion is superb. It's too hard to catch those kind of sparkling ideas with our common mind. Great!
ကောင်းလိုက်တာအစ်မရေ ခုလိုပေးဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူး
ဒီစာကို မူလ ရေးသူဟာ ဆရာထင်ကြီးလို့ မိတ်ဆွေတယောက်က ပြောလို့ သိရပါတယ်။ လာရောက်အားပေးကြသူများ အသေအချာ ခံစားနားလည်သွားကြသူများ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။